Saameynta Ay Barca Ku Yeelan Karto Inuu Neymar Ka Tagay, Haddii CR7 Uu Berri Ku Soo Bilaaban Doono & Waxyaabihii Kale Uu Tababare Zidane Kaga Hadlay Shirkiisa Jaraa’id - Laacib.net
Saameynta Ay Barca Ku Yeelan Karto Inuu Neymar Ka Tagay, Haddii CR7 Uu Berri Ku Soo Bilaaban Doono & Waxyaabihii Kale Uu Tababare Zidane Kaga Hadlay Shirkiisa Jaraa’id
Barcelona oo uu ka maqan Neymar ma ahan koox la dhayalsan karo sida uu aaminsan yahay Zinedine Zidane, inkastoo tababaraha Real Madrid uu ka warqabo in raadinta bedelka xiddiga reer Brazil ay noqon doonto howl aad u dhib badan.
Real Madrid ayaa u safreysa Camp Nou lugta hore ee Supercopa de Espana berri oo Axad ah, waxaana uu ninka reer France diyaar u yahay inuu wajaho cid walba uu tababare Ernesto Valverde uu u xusho inuu buuxiyo booska uu baneeyay xiddiga ugu qaalisan dunida.
“Cid walba oo dheesha berri ma noqon doono Neymar, sababtoo ah waa ciyaaryahan aad u fiican, laakiin uma dhutin doonaan.” ayuu Zidane u sheegay warbaahinta.
“Ma jiraan ciyaartoy badan oo la mid ah Neymar.”
Zidane ayaase aaminsan in qaab ciyaareedka Barcelona uusan isbedeli doonin inkastoo ay isbedelo dhanka ciyaartoyda ah ay sameeyeen.
“Waxa ay sameeyeen isbedelo laakiin ugu danbeyn Barcelona waa Barcelona” ayuu yiri.
“Waan garaneynaa sida ay u ciyaaraan, taasna isma bedeleyso, qorshayaashooda isbedel kuma imaan doono.
“Waxaan sheegay inuusan jirin ciyaaryahan la mid ah Neymar, waa ciyaaryahan aan la bedeli karin, laakiin mid kale ayaa booskiisa buuxin doona oo shaqo fiican qaban doona. Haddii aan ku fekerno inay berri inoo sahlanaan doonta, markaas waan qaldanahay.”
Iyadoo uu heysto koox dhameystiran oo uu ka soo xusho shaxdiisa ka dib markii ay Madrid ku guuleysatay UEFA Super Cup, tababaraha Los Blancos ayaa diiday inuu ka hadlo shaxdiisa iyo haddii uu Cristiano Ronaldo ku soo bilaaban doono kulanka berri.
“Berri ayaad arki doontaan” ayuu yiri Zidane. “Jir ahaan iyo maskax ahaanba ciyaartoydu aad ayay u fiican yihiin.
“Qof walba ayaa doonaya inuu ciyaaro taasna waa wax fiican, sidaas darteed waan ku qasbanahay inaan xulasho sameeyo.
“Cristiano Ronaldo waa diyaar. Waa uu fiican yahay, fasax ayuu soo qaatay, inkastoo uu dhowr maalmood nala joogo hadana si adag ayuu uga shaqeeyay taam ahaanshihiisa, waana diyaar.”
Waxaana ay taasi dib u soo celin doontaa BBC oo uu Zidane aaminsan yahay inaysan gabagabo u noqon doonin fursada Isco ee kooxda.
“Waa ay isku fiican yihiin dhamaantood” ayuu yiri. “Waan maamulo nasasiinadooda, laakiin waa la sameyn karaa.
“Ma jiraan wax badan oo aan sameyn karo, sidaasi darteed waan arki doonaa sida aan nagu soo geliyo berri.”
Hal koob ayaa durbaba Real boorsada ugu jira xilli ciyaareedkan, fursada ay koob labaad ku qaadi karaan ayaana dhiirogelin ugu filan tababaraha xitaa haddii ay ka horimaanayaan Barcelona.
“Waa koobka Supercopa, waxaana uu leeyahay qiimo gaar ah sababtoo ah waa koob kale” ayuu yiri Zidane.
“Waan ognahay inuu ka sii qiimo badan yahay marka aan la ciyaareyno Barcelona, sida dad badan ay qabaan kulankaan waxaan la ciyaareynaa kooxda xafiiltanka ugu weyn uu nagala dhaxeeyo, laakiin aniga ahaan taasi waxba iima bedeleyso.”